လျှော့စျေးကြိတ်စက် Shutter ဝယ်ဖို့&ရထားစက်ရုံတွင်နေကာ
အနိမ့်သောစျေးနှုန်းလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုကုလားကာခြေရာခံ roller မျက်စိကန်းသောပြွန်စက်ရုံ
လျှော့စျေးလူမီနီယမ်ပုံမှန် diy ပရိုဖိုင်းကိုစက်ရုံမဝယ်
စိတ်ကြိုက်လူမီနီယံခရမ်းလွန် panel ကိုပရိုဖိုင်းကိုပေးသွင်း
မျက်နှာကျက်နှင့် listello များအတွက် bulk လူမီနီယမ်နဲ့ LED ကိုယ်ရေးဖိုင်အလင်းရောင်ကိုယ်ရေးဖိုင်ရုပ်သံလိုင်း
လူမီနီယမ် Profile ကို LED ကစီးပွားရေးကျဆင်းမှုစတော့ရှယ်ယာများတွင်ပရိုဖိုင်းကိုတပ်ဆင်ထား
အနိမ့်သောစျေးနှုန်းလူမီနီယမ် Profile ကို LED ချွတ်အင်္ကျီပေးသွင်း
Foshan သူရဲကောင်းသတ္တုပူးတွဲ. ,Ltd
Add:Qiaotou, Lutang အသစ်ကရွာ, Guidan လမ်း, Luocun မြို့(Luocun hosipital အနီး), Nanhai ဧရိယာ, Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းတရုတ်
E-mail ကို: Herometal@herometal.net
Qiaotou, Lutang အသစ်ကရွာ, Guidan လမ်း, Luocun မြို့(Luocun hosipital အနီး), Nanhai ဧရိယာ, Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းတရုတ်
ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကြိုးစားကြသည်. တောင်းဆိုမှုသတင်းအချက်အလက်များ,Sample & Quote,ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
Foshan သူရဲကောင်းသတ္တုပူးတွဲ. ,ltd © 2017 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး